Cocaine ရှာဖွေခြင်းကို (CIA) မှပြန်လည်ရှာဖွေခြင်း (၂၀၁၆) သကြားနှင့်ကိုကင်း - cue ဓာတ်ပြုမှုတုံ့ပြန်ရန်အတွက်ထူးခြားသောတိုက်နယ်တစ်ခုသို့အဓိကလမ်းကြောင်းကို Accumbens သို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းအား Dopamine မှီခိုသောနည်းလမ်းဖြင့်ရှာဖွေသည်။ - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
cue reactivity ကိုများအတွက်ထူးခြားသောဆားကစ်: Accumbens Core Pathway မှ Prelimbic ကင်း vs (2016) သကြားရှာကင်း၏ Cued Reinstatement မောင်းတစ်ဦး Dopamine-မှီခိုထုံးစံ၌စုဆောင်းသည်။
J ကို neuroscience ။ 2016 Aug 17;36(33):8700-11. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1291-15.2016.
McGlinchey EM1, ဂျိမ်း MH2, Mahler SV3, Pantazis ကို C2, Aston-ဂျုံးစ်, G4.
accumbens nucleus မှအချိုမှုသွင်းအားစု (NAc) conditional မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်အဓိကအား medial prefrontal cortex (mPFC), basolateral amygdala (BLA), နှင့် hippocampus (vSub) ၏ ventral subiculum ကနေအစပြုတာဖြစ်တယ်။ T ကhese ဒေသများတွင်ကင်းရှာ၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement စဉ်အတွင်း Fos (အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအမှတ်အသား) ကိုဖော်ပြပေမယ့်ဒီဒေသများအတွင်းအာရုံခံသာ subpopulations မူးယစ်ဆေးရှာမောင်းတယ်။
ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် function မူးယစ်ဆေး-ရှာစဉ်အတွင်း activated အာရုံကြော subpopulations ခွဲခြားရန်တလမ်းတည်းဖြင့်သူတို့စီမံကိန်းပစ်မှတ်ဆနျးစစျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက်များတွင်ကျနော်တို့ NAcSh (NAc core ကို (NACC) သို့မဟုတ် NAc shell ကိုမှ Fos prelimbic cortex (PL) တွင် cocaine- နှင့် sucrose-ရှာကြံ၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement စဉ်အတွင်းစကားရပ်, infralimbic cortex (IL), BLA နှင့် vSub အာရုံခံကြောင်းစီမံကိန်းကိုလေ့လာ ) ။ PL, BLA နှင့် vSub အတွက်အာရုံခံ NACC မှစီမံကိန်းသော်လည်းမ NAcSh အကြောင်း, cue-သွေးဆောင်ကင်းရှာစဉ်အတွင်း Fos ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပေမယ် sucrose မရှာ။ သို့သော် PL-NACC လမ်းကြောင်းကသာ activation အပြုသဘော NACC မှ BLA သို့မဟုတ် vSub သွင်းအားစုနှင့်မတူဘဲကိုကင်း reinstatement အပြုအမူဆက်နွယ်နေကြောင်း။
အဆိုပါ PL-NACC လမ်းကြောင်းများအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍအတည်ပြုပေးရန်, ဤလမ်းကြောင်းတစ် dopamine-မှီခိုထုံးစံ၌စုဆောင်းသောအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ dopamine အချက်ပြ PL ထဲမှာပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရမထွက်ရတစ် pharmacological အဆက်ဖြုတ်ချဉ်းကပ်နည်းကိုသုံးခြင်းနှင့်အချိုမှုအချက်ပြသည့် contralateral အတွက်ပိတ်ဆို့ခဲ့သည် NACC ။ ဤသည်မှာအဆက်ဖြုတ်ကင်းရှာကြံ၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement attenuated ပေမယ် sucrose ရှာ၏ reinstatement မသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုကင်းရှာထဲမှာ PL-NACC လမ်းကြောင်းများအတွက်အခန်းကဏ္ဍမီးမောင်းထိုးပြနှင့်ဤ glutamatergic စီမံချက်များ reinstatement မောင်းတစ်ဦး dopamine-မှီခိုထုံးစံ၌စုဆောင်းဖြစ်ကြောင်းပြသပါ။
Relapse ကိုကင်းစွဲ၏အောင်မြင်သောကုသမှုသိသိသာသာအတားအဆီးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ sucrose ရှာနှိုင်းယှဉ်ရှာကြံကင်း၏ cued reinstatement စဉ်အတွင်း accumbens nucleus မှ glutamatergic သွင်းအားစုများ၏ဆွေမျိုး activation သွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ Prelimbic cortex (PL) နျူကလိယမှပရိုဂျက် core ကို (NACC) accumbens ထူးခြားအပြုအမူ, sucrose-ရှာအပြုသဘောကိုကင်း-ရှာဆက်နွယ်နေကြောင်းတဲ့ထုံးစံ၌ Fos ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပေမယ့်မပေး။ အပိုဆောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့စမ်းသပ်ချက်ဟာ PL-NACC လမ်းကြောင်းကင်း-ရှာမောင်းတစ်ဦး dopamine-မှီခိုထုံးစံ၌မူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ်တွေကိုအားဖြင့်စုဆောင်းခံခဲ့ရကွောငျးဖျောပွခဲ့ပေမယ့်မပေး sucrose-ရှာ, အပြုအမူ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုမီးမောင်းထိုးပြ PL NACC မှပရောဂျက်တစ်ခုကိုအာရုံခံ, နှင့်သဘာဆုလာဘ်ရှာအကျိုးသက်ရောက်စေမကင်း relapse ဆက်ဆံဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဟော်မုန်းများအတွက်အလားအလာပစ်မှတ်အဖြစ် dopamine နေဖြင့်၎င်းတို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။
KEYWORDS: basolateral amygdala; ကိုကင်း; dopamine, နျူကလိယ accumbens; prelimbic cortex; ventral subiculum
Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1291-15.2016